Ebube SmartLife: Ihe obula nke Honor gosiputara iji melite katalọgụ ya | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | Ngwa, General
Honor emeela ihe ngosi iji melite katalọgụ ya, oge a gafere smartphones ma ọ bụ ihe eji ejiji, ebe a ọ chọrọ itinyekwu uche na isiokwu metụtara ụlọ, kamakwa iji ojiji ọkachamara eme ihe ebe ọ bụ na ọtụtụ ngwaahịa ya emepụtara taa nwere usoro gbakwasara ngalaba ahụ. Anyị na-egosipụta n'elu mbadamba nkume ọhụrụ ọ bụla nke na-abịa ịbawanye katalọgụ nke na-adịchaghị iche na laptọọpụ na-eweta nkọwa dị oke mkpa.
Na-ahapụghị ihe niile metụtara ụlọ smart, ebe ha chọkwara imelite katalọgụ ha na ọtụtụ ngwaahịa ndị na-atọ ụtọ, dịka onye ntanetị na njikọta. WiFi 6 +, TV ohuru site na nsopuru Honor ọhụụ ma ọ bụ ihe nhicha igwe nwere ọgụgụ isi na, na mgbakwunye na ikpocha ala, na-ehichakwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ihe niile Honor mere ka anyị mata n’ozi ya, nọrọ anyị.
1 Sọpụrụ ViewPad 6
1.2 Karịrị imewe mara mma
2 MagicBook Pro: Laptọọpụ na-achịkwa ha niile
3 Sọpụrụ Router 3
4 Sọpụrụ ọhụụ X1
5 Sọpụrụ Earbuds X1
6 Cleaner Vacuum
Sọpụrụ ViewPad 6
Anyị na-aga n'ihu na akụkọ sitere n'aka onye nrụpụta Asia Honor, oge a na-eji ohere SmartLife ha eme ihe, ha kwuwapụtala ngwaahịa na-abịa ịsọ mpi na Apple's iPad Pro. Otu ngalaba nke Mbadamba ụrọ nke ọ dị ka ọ bụkwaghị ndị na-agba ya, ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka onye ọ bụla chọrọ ihe karịa "ọkachamara" na-abanyeghị na gburugburu ebe obibi apụl.
Mbadamba ụrọ nke nwere ihe mara ezigbo mma, nke nwere n'ihu jiri ya rụọ ọrụ kpamkpam, na-eji nke ọhụrụ ahụ eme ihe Kirin 985 5G processor, ihe nhazi nke onwe emebere iji mezuo ihe nile choro nke di elu, nke na-eweta nkwado maka ntaneti 5G. Akwa Ihuenyo 10,4-inch na 2k mkpebi nke teknụzụ IPS nke na-echetara anyị ọtụtụ asọmpi ahụ.
Ihuenyo: 10,4 sentimita asatọ, QHD + IPS
Ihe nhazi: Kirin 985 5G
Ebe nchekwa RAM: 4 / 6 GB
Nchekwa: 64 / 128 / 256 GB
software: Ime Anwansi UI 3.1 gam akporo 10
Igwe n'ihu: 8 MPX
Igwefoto na-abịa: 16 MPX
Batrị: 7.250 mAh, ụgwọ ngwa ngwa 22.5 W
Njikọ: USB C, Bluetooth 5, WiFi 6, 5G
Akụkụ: 245.2mm x 154.9mm x 7.8mm na 475g
Enweta: June 2020
Karịrị imewe mara mma
ViewPad 6 karịrị anya. Ogwe 2k nke 10,4 nke anụ ọhịa na-elekọta n'ihu na 84% n'ihu obibi, yana nits 470. Ngwaọrụ ahụ na-eji ihe ọhụụ ọhụrụ nke sitere na anyanwụ na-enyocha ya site na epupụta, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, isi awọ na ọlaọcha.
Ọ chọkwara ịpụ n'ihi ịbụ onye izizi nwere WiFi 6 +, na ọsọ ọsọ na- 1,8 GB / s, na mgbakwunye na nke a, ekele Kirin 985 anyị ga-enwe njikọ 5G na gbapụrụ ọsọ nke 917 MB / s. Ihe niile a na-akwado site na nnukwu 7.250 mAh batrị na nkwa zuru ezu obodo kwụụrụ na 22,5W ụgwọ ngwa ngwa Nke ahụ nwere ike iyi ka ọ gaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na batrị batrị hà.
MagicBook Pro: Laptọọpụ na-achịkwa ha niile
Ọ bụ laptọọpụ ọhụrụ dị ọhụrụ, nke ha nyere aha nwere ike ịmara ọtụtụ ndị, mana nke ahụ na-egosi na ha na-achọ ịnye ihe dị oke mma na ọkwa asọmpi ahụ. Laptọọpụ ọhụrụ a na-abịa na njirimara arụpụtara ọhụrụ gụnyere, na-eji a Ihuenyo 16,1 nke anụ ọhịa nọchiri anya, nke nwere naanị 4,9mm bezels na 90% nke n'ihu nwere site na panel ahụ ma kwado 100% nke sRGB agba mammoth, panel a anaghị eji acha anụnụ anụnụ iji chebe anya anyị.
Njirimara arụmọrụ gụnyere multiscreen nke enwere ike ịdọrọ na ama gị ma ọ bụ nyocha nke mpụga, ebe ị na-ahapụ gị ịza oku na-enweghị imetụ ekwentị gị aka. N'ime, ọ nwere Ọgbọ 7 nke Inter Core iXNUMX processoryana nke ihe eserese GeForce MX350 site na Nvidia wee rue 16GB nke ụdị DDR4. Ahịa na China si € 772 ruo 862 XNUMX na ọnụego mgbanwe.
Sọpụrụ Router 3
Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ rawụta, ogo nke ngwaọrụ a na-enye anyị bụ ikike ịpụpụta mgbaama ahụ WiFi 6 +, ugboro atọ ngwa ngwa karịa onye bu ya ụzọ WiFi 5, ugboro ole 160 MHz. Ngwaọrụ a na-eji mgbawa Kirin W650 ma gosipụta nbudata nke ihe ruru 2,4 GB / s, okpukpu abụọ ihe Snapdragon processors na-enye.
The rawụta nwekwara na arụmọrụ iji kpochapụ nnyonye anya na ngwaọrụ ejikọrọ, nakwa ike iji mee ngwangwa ngwa dị ka egwuregwu vidio ma ọ bụ ngwa agụmakwụkwọ. Ọnụ ego a na-akpọsa na China bụ € 28 na ọnụego mgbanwe.
Sọpụrụ ọhụụ X1
Ọhụụ X1 bụ TV nwere ihuenyo ruru 94% n'ihu, nke na-egosi na ihe niile anyị hụrụ bụ onyonyo ahụ. Mkpebi 4K gbasaara ruo 92% nke DCI-P3 Agba Gamut. TV ọhụrụ ndị a nwekwara injin onyonyo dabere na ọgụgụ isi na nkwado maka ọdịnaya HDR na asambodo TÜV Rheinland na-ejighị ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka mmadụ ghara ịhụ ụzọ.
Akụkụ ọzọ nke TV ọhụrụ a chọrọ ka ọ pụta ìhè bụ ụda, na-enye a usoro nwere okwu 10W anọ ya na ihe ngbanye 31. Ngwaọrụ ahụ ga - enyere gị aka ịmekọrịta ya ọbụlagodi mgbe ọ na - apụ, site na enyemaka olu. Gị processor bụkwa ike nke na-enyefe video ruo 8K mkpebi na 30 Fps. Ọnụahịa ha sitere na 296 424 ruo € XNUMX na mgbanwe ahụ.
Sọpụrụ Earbuds X1
Ezi ekweisi ikuku ọhụrụ ejiri usoro ya, na-enye nnwere onwe nke 24 ruo 24 awa iji dị ka onye nrụpụta, Nkagbu Noise nọ n'ọrụ, 15W ikuku ikuku na ndakọrịta na ma iOS na gam akporo, na-ekwe nkwa ịbụ ezigbo ọnụ nhọrọ karịa ahịa zuru ezu. Ọnụahịa ya na China bụ ihe dị ka € 26 ịgbanwe.
N'ikpeazụ, anyị ga-ezo aka na ngwaọrụ maka ụlọ, ọ bụ onye na-ehichapụ ihe nhicha site na ika Asia nke na-ehichapụkwa ala, nwere ihe ruru 350W nke ike mmịpụta, nke na-ekwe nkwa ịme ụdị nsị ọ bụla. Ọ ga - enwe ike ikpochapu ma kpochaa n'otu oge ahụ, si otú a na - achịkwa iji merie nsị kachasị eguzogide ala.
Honor kwere nkwa na ngwaọrụ ahụ ga-enwe ike iwepụ 99% nke nje bacteria na-arahụ na ala, ọ bụ dakọtara na ngwa nke na-egosi ọnụọgụ calorie ọkụ mgbe ị na-eji ya, ya mere anyị ga-enwe ike ịtụle mmega ahụ mgbe ị na-ehicha. Ọnụahịa ya na China bụ 167 XNUMX iji gbanwee, karịa ihe na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ONkwanyere SmartLife: Ihe ọ bụla Honor gosipụtara iji melite katalọgụ ya